Pinoy Toons: गोरा अश्लील खेल & Lbfm सेक्स Simulator
सबै भन्दा राम्रो फिलिपिन्समा अश्लील खेल वरिपरि
अरे त्यहाँ, र स्वागत गर्न Pinoy Toons! हाम्रो टीम काम गरिएको छ, घडी वरिपरि लागि गत3वर्ष curate गर्न सबै भन्दा राम्रो को एक फिलिपिन्स-थीमाधारित अश्लील खेल इन्टरनेट छ प्रदान गर्न । पछि मा रहन को लागि देश6महिना मा एक लगानी स्काउटिंग साहसिक, म प्रेम मा गिर फिलिपिन्स र विशेष मा, यो महिला, त्यो त्यहाँ बस्न. को एक परिणाम रूपमा अनुभव कि, मैले निर्णय गरे कि जब म घर मिल्यो, म चाहन्छु बनाउन अश्लील खेल वेबसाइट समर्पित देश! मलाई बस भनेर भन्न केही धडकता एक तातो LBFM र जब हामी तिनीहरूलाई राख्न एक खेल मा, यो स्पष्ट थियो बस कसरी जंगली कुराहरू प्राप्त गर्न जा थिए., म छु खोजीमा ताजा स्वाद को भनेर सानो खैरो fucking मिसिन साहसिक र now that I ' m संग सशस्त्र एक अश्लील खेल थिम्ड वरिपरि ठीक छ कि, यो गौरवशाली भन्न धेरै कम से कम! Addicts को दक्षिण पूर्व एशिया मा धुन आवश्यकता, तुरुन्तै छैन भने ढिलो होस्: यो सेक्स गेम खोज बनाउन जा रहेको छ. तपाईं एक धेरै खुसी व्यक्ति साँच्चै । साइन अप र यो बाहिर प्रयास चार्ज को पूर्ण मुक्त तपाईं गर्न जाँदै छैन छौं निराश हुन एक पटक तपाईं बस कसरी देख्न अविश्वसनीय र Pinoy Toons छ – कि तपाईंलाई ग्यारेन्टी गर्न सक्छन्, लिन, बैंक गर्न!
पूर्णतया अनुकूली ग्राफिक्स इन्जिन
If you 're मा चलिरहेको एउटा पुरानो मिसिन, तर तपाईं अझै पनि खेल्न चाहनुहुन्छ आधुनिक खेल, यो कहिलेकाहीं रूपमा आउन एक बिट को एक आघात जब तिनीहरूले छौं अविश्वसनीय ढिलो, हेर्न डरलाग्दो वा केही दुर्लभ उदाहरण, simply won' t work at all! यो बारेमा ठूलो कुरा Pinoy Toons छ कि यो भएको छ, जमीन देखि निर्माण संग एक्सप्रेस आशय to make sure that everyone is able to access it. हाम्रो इन्जिन एक विशेष सिस्टम अनुमति दिन्छ कि यो पत्ता लगाउन bottlenecks र भाला प्रभाव छुटकारा स्क्रीन को तत्व कम हो कि महत्त्वपूर्ण अरूलाई भन्दा., उदाहरणका लागि, वास्तविक-समय मा कमी बहुभुज गणना को एक छ, हाम्रो प्रमुख विशेषताहरु दिन्छ कि लागि एक मामूली कमी दृश्य गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सहज gameplay र मिल्दो framerates. यस अलावा, Pinoy Toons पनि खेल्न अनुमति दिन्छ, खेल मा आफ्नो मोबाइल उपकरण संग एक अनुकूल संस्करण लागि विशेष रूप डिजाइन साना पर्दाका. यो काम को एक धेरै राखे, यो सँगै देखि, तर हामी गर्न चाहन्थे यी सेक्सी गोरा गोरा देख रूपमा स्वादिष्ट, सकेसम्म यो थियो मात्र बाटो हामी जान सक्छ तल । , घुमा को हात मेरो विकास टीम मा यो प्राप्त गर्न सही एक चुनौती थियो, तर अब हामी पूर्ण पहुँच लागि दुवै पीसी र मोबाइल प्रयोगकर्ता, हामी कहिल्यै गर्नुभएको जस्तो लाग्यो अधिक विश्वस्त खेल मा हामी छौं जारी गर्न सबैलाई!
बादल खेल मा Pinoy Toons
देखि तपाईं आवश्यक सबै पहुँच प्राप्त गर्न हाम्रो खेल एक ब्राउजर, यो हामीलाई दिन्छ अद्वितीय क्षमता frontload सबै classically स्थानीय तत्व हुनुहुन्छ प्रयोग गर्न सीधा हाम्रो सर्भर. के हामी मतलब द्वारा, यो ठीक? आफ्नो बचत हो स्वचालित र मात्र कि, they ' re सिन्क्रोनाइज गर्न बादल । जब तपाईं यो खेल खेल्न, तपाईं चिन्ता गर्न आवश्यक छैन बारे आफ्नो शक्ति मर्ने र तपाईं हारी प्रगति, वा अन्यथा पीडित विदेशको थिएन किनभने तपाईं बचत गर्न सम्झना गरेपछि 'समाप्त' संग एक सत्र., हाम्रो सर्भर व्यवस्थापन सबै को लागि तपाईं त तपाईं जान सक्नुहुन्छ र एक खेल बाहिर प्राप्त बिना कुनै पनि नकारात्मक stimuli whatsoever. के अधिक छ, तपाईं पनि 100 बचत राज्य स्लाट्स गर्न अनुमति, रिप्ले खेल देखि विभिन्न दृष्टिकोण र बनाउने विभिन्न विकल्प बाटो साथ । यस सुविधा विशेष महत्त्वपूर्ण छ किनभने कसरी हाम्रो शीर्षक काम गर्दछ: यो व्याख्या गरौं अधिक बारेमा कसरी आफ्नो विकल्प एक फरक बनाउन जब खेल!
निर्णय मा Pinoy Toons कुरा
धेरै खेल मा, यो विकल्प तपाईं बनाउन simply won 't determine what you' re capable of doing र कसरी तपाईं खेल पूरा गर्न सक्छन्: होइन कि सम्झौता गर्न आउँदा यो PT. We ' ve समाते मा मौका सिर्जना गर्न एक अन्तरक्रियात्मक अनुभव र भाग्यो संग यो बिन्दु गर्न अब हामी कहाँ सबैलाई विचार लाग्नुभएको छ प्रेम बिल्कुल हामी कहाँ छन् । आधारभूत परिसर को सबै निर्णय – हुन कि ठूलो वा सानो – कसरी परिवर्तन हुनेछ विभिन्न NPCs अन्तरक्रिया तपाईं र थप गर्न, जो कि व्यक्तिहरूलाई तपाईं गर्न सक्षम छौं यौन सम्बन्ध संग., When you ' re ठूलो शहर मा, तपाईं पाउन सक्छ बालिका मा अधिक रुचि हो आफ्नो आय, जबकि बालिका बन्द मा द्वीप को बीचमा कतै बस तपाईं चाहनुहुन्छ गर्न शारीरिक शक्तिशाली छ । Pinoy Toons गर्न अनुमति दिन्छ डिजाइन आफ्नो चरित्र धेरै सुरुदेखि को एक गुच्छा संग, विभिन्न मापन सुनिश्चित गर्न रही छौं भनेर एक साँच्चै अनुपम अनुभव हरेक समय तपाईं पुन: प्रयास गर्नुहोस्. यो क्षमता समावेश गर्न टिप्न, एक काम को शरीर प्रकार, बुद्धि स्तर र यति मा । , तपाईं प्रगति को रूप, तपाईं पनि क्षमता टिप्न विभिन्न संवादको विकल्प र संलग्न विभिन्न गतिविधिमा बनाउन आफ्नो सफलता संग महिलाहरु छ कि थोडा राम्रो छ । किन यो छ. धेरै भएको बचत अंक ठूलो छ: you ' ll want to go back and try विभिन्न दृष्टिकोण सबै समय!
सेक्स सिम्युलेटर इन्जिन: हाम्रो गोप्य हतियार
We don ' t गडबड वरिपरि मा यहाँ Greenhill Productions, जो छ हामी किन यो मतलब जब हामी भन्छन् कि हाम्रो सेक्स सिमुलेशन इन्जिन छ शायद सबै भन्दा राम्रो बजार मा अब । तपाईं, हुनेछ छ पहुँच गर्न को एक पुरा सुइट bells र whistles नियन्त्रण गर्न आफ्नो अन्तरक्रियामा संग NPCs र तिनीहरूलाई बनाउन कसरी ठीक तपाईं चाहनुहुन्छ. यो एक साँच्चै अनुपम टुक्रा गियर र हामी गर्व छौं कति सम्म साथ हामी गर्न आएको छु यो एक आधुनिक टुक्रा को मशीनरी कि हामी को गर्व हुन सक्छ., इन्जिन चल्छ जस्तै एक निर्देशक स्टूडियो दिन्छ कि शट कल देखि सबै मा प्रकाश र ध्वनि माध्यम गति, तीव्रता, खेलौना उपयोग, cumshot स्थान र यति मा । Pinoy Toons लिएर छ अनुभव को नियन्त्रणका सेक्स संग गोरा गोरा अर्को स्तर गर्न. If you ' ve ever wanted complete control over how एक LBFM हुन्छ तल र फोहोर संग एक ठूलो कुखुरा, यो सिम्युलेटर तपाईं को लागि! यो बाहिर प्रयास गर्नुहोस् र तपाईं मा छक्क हुनेछु सिर्फ कसरी अविश्वसनीय कुराहरू प्राप्त गर्न सक्छन् ।
त्यसैले, तपाईं के प्रतीक्षा गर्दै? साइन अप र मा लग Pinoy Toons प्राप्त गर्न अब अन्तिम खेल अनुभव!